'जिओ' काे फाइभजी स्मार्टफोन आउदै, मूल्य केवल ४८ सय रुपैयाँ ! - Naulo Samachar
‘जिओ’ काे फाइभजी स्मार्टफोन आउदै, मूल्य केवल ४८ सय रुपैयाँ !
२०७७ कार्तिक ४, मंगलबार मा प्रकाशित ५६८ पटक पढिएको
कात्तिक ४, काठमाडौं। रिलायन्स जिओले चाँडै नै भारतीय बजारका लागि एन्ड्रोइडमा आधारित फोरजी तथा फाइभजी स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सस्तो मूल्यको फाइभजी फोनको रुपमा आउने यो ह्याण्डसेटको मूल्य तीन हजार रुपैयाँ भारु अर्थात ४८ सय नेपाली रुपैयाँमै उपलब्ध हुने बताइएको छ ।